ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရေးမပါသူတစ်ယောက်လို ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သင်ပြုလုပ်ပေမယ့်အရာများ
လူတစ်ယောက်က တစ်ခါတလေမှာ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေချိန်နှင့် အရေးမပါသူတစ်ယောက်လိုလည်း ခံစားဖူးပါလိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့် ဒီလက္ခဏာတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုမရှိခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း၊ စိတ်ဒဏ်ရာနှင့် ခက်ခဲသောအခြေအနေတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ အာရုံခံနိုင်မှုတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ လက်ခံမိခြင်းက နေ့စဉ်ဘဝထဲက အလုပ်အကိုင်အခွင်အလမ်းတွေမှာလည်း ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဟာ တစ်စုံတရာထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့ ထင်လာတာနဲ့အမျှ ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေဆီရောက်နိုင်ဖို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သံသယတွေများနေစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ အကူအညီရှာဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။
ဘာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးမဲ့သူတစ်ယောက်လို ခံစားနေရတာလဲ
အရေးမပါသူတစ်ယောက်လိုခံစားရခြင်းက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြီးပြင်းလာရတဲ့အခြေအနေ၊ လူမှုရေးဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုင်ရာပြဿနာတွေအားလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာအားလုံးကို အကျယ်ချဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်….
သင့်မှာ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ဆိုးရွားသော ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ လျစ်လျူရှုခံရခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရခြင်း၊ ကလေးငယ်ဘဝမှာ မတရားပြုမူဆက်ဆံခံရခြင်းက တန်ဖိုးမဲ့ခြင်းကို ခံစားနေရခြင်းအတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ တစ်ခြားလူတွေဆီက မကြာခဏဝေဖန်ခံရလေ့ရှိသူတွေဟာ ကလေးဘဝခံစားချက်တွေကို လူကြီးဘဝတွေအထိ သယ်လာကြပါတယ်။
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာများစွာဖြစ်ဖူးခြင်း
ဒီလိုအပျက်သဘောဆောင်တဲ့ပြဿနာများစွာဟာ ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူနေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကိုယ်ဟာ အသုံးမကျသူတစ်ယောက်/ အရေးမပါသူတစ်ယောက်လို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လက်ခံထားမိပါလိမ့်မယ်။
နက်နဲသော ပြဿနာတွေနဲ့ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာ ကိုင်တွယ်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်ယ်။ ဥပမာ – ကွာရှင်းခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာ (သို့) အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခြင်းစတဲ့ ကြီးမားတဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကို တွေ့ကြုံပြီးနောက်မှာ ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးမဲ့သူတစ်ယောက်လို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလိုပဲ မကြာခဏရှက်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးမရှိသလို ခံစားရခြင်းကလည်း လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ စိတ်သောကကို ဖြစ်စေပြီးနေ့စဉ်အလုပ်တွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ခက်ခဲစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာတွေကို ဘယ်လိုကုစားကြမလဲ???
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြင်ကြင်နာနာ ပြောဆိုပေးပါ
တန်ဖိုးမဲ့သူလိုခံစားနေရသူတွေဟာ အပျက်သဘောအတွေးတွေနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ပြန်လည်ပြောဆိုခြင်းတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံဖို့ အာရုံစိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မကောင်းပြောနေမိပြီဆိုရင် ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲပါ (သို့) လက်တွေ့ကျသောပုံစံတစ်ခုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ”ငါဘယ်တော့မှ လုပ်နိင်မှာမဟုတ်ဘူး”လို့ ပြောနေမယ့်အစား တစ်ခုခုကို စလုပ်ကြည့်ပါ။
၂။ တန်ဖိုးမဲ့သူလို့ တွေးမိတိုင်း သတိထားပါ
ငါဘာလို့ ဒီအတွေးတွေဝင်နေတာလဲ? တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ တန်ဖိုးမဲ့သူလို့ တွေးမိတိုင်း တစ်ခုခုကို တုန့်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းတွေရှိလာတိုင်း သင်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ အနည်းဆုံးတော့ အဖြေတစ်ခုခုရအောင် ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တန်ဖိုးမဲ့သူဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ကုသနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ တစ်ဆက်တည်းမျှဝေချင်တာတစ်ခုက ကိုယ်တိုင်က နေရာတစ်ခုခုမှာ ကျွမ်းကျင်အောင် အချိန်ပေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ဂရုမစိုက်သူတွေ (သို့) ကိုယ်က ဂရုစိုက်မခံရဘူးလို့ ခံစားရတာတွေက မလွဲမသွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ တစ်ခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးကြည့်ပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ ခံစားမိတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကိုယ်ထက် တစ်ခြားတစ်ခုခု/တစ်ယောက်ယောက်ကို အာရုံစိုက်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (သို့) လိုအပ်နေသူတစ်ဦးဉီးကို ကူညီခြင်းက တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ကြွယ်ဝမှုအတွက် ကူညီပေးတာကြောင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်တွေက ပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။